Mgbasa ọkọchị - GamblingBulldog.com - cheapinternetsecuritysoftware.com
Mgbasa ọkọchị – GamblingBulldog.com
By Mildred Coleman On June 7, 2021 No Comments
Isiokwu a nwere obere oge inye. Naanị maka ndị okenye. Gwuo egwu.
Oge okpomọkụ dị ebe a, nke ahụ pụtara mkpọsa nzuzu maka ndị egwuregwu ọhụrụ na ndị dị ugbu a site na saịtị kachasị mma nke cha cha UK.
Ọnwa Isii 6, 2021 – June 10, 2021
Soro otu na Gonzo n’ọchịchọ ya merie ihe nrite ego ruru £ 2,500! Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị nwekwara ike iburu ihe nrite nke ụlọ kwa ụbọchị oge ọbụla ị ga-enweta ihe achọrọ si na egwuregwu Casiplay 3 ruru eru kwa ụbọchị!
Iji bido, ndị a bụ usoro ịkwesịrị ịgbaso:
Gwuo na egwuregwu tozuru etozu nke Casiplay setịpụrụ maka nkwalite a Nweta isi maka £ 50 ọ bụla ị gbara. You 50 ị fugharịrị = akara 1Mee ya n’elu igwe ndu wee nwee ohere iji merie ihe ruru £ 2,500
Nkwalite a na mkpakọrịta na nnukwu ndị mmepe egwuregwu dị ka Red Tiger Gaming, Evolution Gaming, na Net Entertainment. Maka egwuregwu ya tozuru etozu, enwere egwuregwu Gonzo dịka:
Gonzo’s QuestGonzo Quest MegawaysGonzo’s Treasure Hunt
Maka ndị egwuregwu niile mere ya n’elu ọkwa mgbe oge nkwalite ahụ gwụsịrị, ihe ndị a bụ ihe nrite ndị a
Ebe 1st = £ 2,5002nd = £ 1,5003rd ebe = £ 7504th ebe = £ 5005th ebe = £ 2506th to 10th place = £ 15011th to 15th = £ 10016th to 20th place = £ 50
A ga-ekwuwapụta ndị mmeri niile site na June 11, 2021, ha ga-enwetakwa ihe nrite ha na-enweghị nchegbu gbasara ịkpa nkata. N’ihe banyere Nrite Kwa ,bọchị, ndị a bụ uru ị ga-enweta site n’ịgba ma ọ dịkarịa ala £ 50 na egwuregwu ndị ruru eru:
N’etiti June 7 na June 8 na 7 AM GMT = 25 Bonus Spins na Gonzo’s Quest. Ntughari ọ bụla na-efu 20 0.20N’etiti June 8 na June 9 na 7 AM GMT = 50 Bonus Spins na Gonzo’s Quest Megaways. Ntughari ọ bụla na-efu £ 0.10N’etiti June 9 na June 10 na 7 AM GMT = £ 5 ego a ga-eji na Gonzo’s Treasure Hunt Slot naanị
Mgbe oge nkwalite ahụ gasịrị, a na-ezigara ndị mmeri niile ego ego na spins na-esote ụbọchị na 15 GMT.
Maka ndị egwuregwu ọhụrụ naanị: 100% ruo £ 100 + 150 extra spins Usoro na ọnọdụ ga-adị. 18+
Ọnwa Isii 1, 2021 – June 30, 2021
Ọ bụ Mad-Afọ ara na Casimpo na niile na-kpọrọ n’oge a crazy oge dị mma! A sị ka e kwuwe, anyị na-ebirịrị n’etiti etiti afọ ka anyị kwesịrị inwe anụrị.
Iji mee ka ihe na-atọ ọchị na nzuzu na cha cha, Casimpo na-akpọ ndị egwuregwu niile ka ha bịa nwee obi ụtọ 360 Bonus Spins. Ndị na-egwu egwu nwekwara ike ịrịọ ego ego ọzọ ruru that 1,500. Chọpụta ihe, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ cha cha cha etiti afọ a ruo 3x ozugbo ị ruru eru! Iji mee ka ọtụtụ ọnwa June gị, ndị a bụ ọnọdụ na ihe nrite ị nwere ike ịtụ anya site na onyinye a.
Kwụpụ 1 = Debe opekata mpe £ 20 ma jiri akara pụrụ iche: JUN21Step 2 = Nweta 25% nke ego ruru ihe ruru £ 500
Nzọụkwụ 1 = Tinye ma ọ dịkarịa ala £ 10 ma jiri koodu pụrụ iche: FS15Step 2 = Nweta 15 Bonus Spins nke ị nwere ike iji na Steam Tower egwuregwu
Nzọụkwụ 1 = Debe opekata mpe £ 20 ma jiri koodu pụrụ iche: FS30Step 2 = Nweta 30 Spins Spins nke dị naanị na Gordon Ramsay Hell’s Kitchen
Nzọụkwụ 1 = Tinye ego ma ọ dịkarịa ala £ 50 ma jiri koodu pụrụ iche: FS75Step 2 = nweta 75 Bonus Spins ndị dị irè na mkpụrụ osisi Shop Megaways naanị
Ndị a bonuses nwere ike-ekwu 3x n’oge nkwado oge. All bonuses ma ọ bụ winnings si daashi Spins nwere a 50x wagering chọrọ iji wepụ ego. E jiri ya tụnyere casinos ndị ọzọ, ego niile na mmeri sitere na onyinye a ga-agwụ ụbọchị 2 ka e debanyere akaụntụ ndị mmeri ahụ.
Maka ndị egwuregwu ọhụrụ naanị: Na-abịa n’isi nso Usoro na ọnọdụ ga-adị. 18+
Ọnwa a bụ oge iji nwee ọ Timeụ n’oge ezumike oge ezumike na saịtị Aladdin nke ịgba chaa chaa! N’ihi ya, ọ dịghị ihe dị mma karịa ememe a Summer na ịke na ihe dị egwu giveaway. Y’oburu n’acho icho mmanu na azu ulo gi, nka nwere ike buru cha cha zuru oke diri gi. Ọ bụla ọkpụkpọ na-abanye a giveaway nwere ike merie 1 nke 8 n’èzí Pizzacraft Deluxe ovens.
8x Pizzacraft Deluxe Pizza Kit maka 18 sentimita asatọ na 22.5 sentimita asatọ Kettle Grills PC7001, Silver, 224.32
Ndị a zuru oke maka nnọkọ anụ ahụ. Yabụ, jide ohere gị iji merie oven pizza ndị a site n’ịgba tenner ma ọ bụ karịa na egwuregwu ịgba chaa chaa. Gwuo ma na-agba mgba na Primate King Slot n’etiti June 1 na June 30, 2021, ịbanye. Maka ego ọzọ ọ bụla £ 10 ị gbagoro na Primate King, ị ga-enweta ntinye ọzọ na inye ego.
Iji mee ka oge ọkọchị a bụrụ ihe na-egbu mgbu, ha gbakwunyere nhọrọ maka ndị mmeri na-ahọrọ ego karịa oven. Ndị mmeri niile nwere nhọrọ iji merie ihe nrite ego ọzọ ruru £ 245 nke a na-akwụ ụgwọ dị ka Real Cash. A ga-amara ndị mmeri ahụ site na email n’ime ụbọchị 7 mgbe ngwụsị nke nkwalite ahụ gasịrị. Ọzọkwa, mmeri niile sitere na nkwalite a na-abịa 65x wagering chọrọ.
Maka ndị egwuregwu ọhụụ: Welcome bonus: 100% to £ 66 2nd to 6th deposit bonus: 100% up £ 66 18+. Ndị egwuregwu ọhụụ. Otu onyinye na-enye onye ọkpụkpọ ọ bụla. Min nkwụnye ego £ 20. Max bonus nzọ £ 5. A ga-eji ego enye ụgwọ n’ime ụbọchị 30 na ego ị na-atụgharị n’ime ụbọchị 10, ma ọ bụghị na a ga-ewepụ ihe ọ bụla eji ya. Ego ego bụ 100% nke nkwụnye ego mbụ gị ruo £ 66 tinyere 66 bonus spins na Book of Dead naanị, na 50% nke nkwụnye ego 2-6 (gụnyere) ruo £ 66. A na-akwụ ụgwọ ego ndị a na-agbakọkarịrị bonus dị ka ego cha cha ma na-etinye ya na £ 50. Ego ego dị iche iche na ego ego ma na-edo onwe ha n’okpuru 35x na-agbakọ ego nke ego gbakwunyere ego. Naanị ego ego na-agụta na wagering req. Usoro itinye.
Casinolọ cha cha
Onyinye Pool Na-enwu: £ 4,000,000 Cash
Ruo November 17, 2021
Kwesịrị ekwesị maka ndị niile na-edebe ego, ndị ahịa Casino Planet nwere ike itinye aka na onyinye kwa izu nke Pragmatic. Site na ọdọ mmiri bara uru nke ruru £ 125,000, ndị na-edebe ego nwere ohere iji nweta ọtụtụ onyinye nwere ike ịdaba kwa ụbọchị.
Iji sonye na onyinye a, banye na egwuregwu cha cha tozuru etozu isonye na asọmpi kwa izu ma ọ bụ onyinye nrite kwa ụbọchị. Egwuregwu niile tozuru etozu nke ejikọtara na mkpọsa a na-egosipụta ọkwa isi nke na-ekpughe ọtụtụ ndị egwuregwu ahụ. Egwuregwu ndị ahọpụtara n’okpuru gụnyere ụgwọ ọrụ ego kwa ụbọchị, yana T&C na asọmpi ahụ:
Wolf GoldMustang GoldNri Bonanza John Hunter Tomb nke Scarab QueenGreat Rhino Megaways John Hunter na Akwụkwọ TutThe Dog HouseThelọ Nkịta MegawaysWild West Gold
Oge nkwado a dị irè ruo na Nọvemba 17, 2021 (23:59 CET). Nke a gụnyere asọmpi 40 7 ụbọchị na ihe ruru ụbọchị 280 kwa ụbọchị bụ ndị bara uru site na Tọzdee ruo Wenesde ọzọ. Nzọ nzọ achọrọ kacha nta maka ntụgharị maka nkwalite a bụ £ 0.50.
Maka asọmpi ahụ, akara dị na bọọdụ izu na-egosi mmeri kachasị ọkpụkpọ ọ bụla na egwuregwu ọ bụla. Ọzọkwa, a na-emelite ndị ndu kwa izu na ezigbo oge ka ndị sonyere nwekwara ike ịlele ha n’oge. Banyere ego a na-agbata n’ọsọ kwa ụbọchị, ndị egwuregwu nwere ike ịnweta akara asaa kwa ụbọchị kwa izu. Otu ogho na nke kacha nta ma ọ bụ karịa nwere ike ịkpalite ihe nrite 1 site na nnukwu ọdọ mmiri dị n’elu.
Ihe na-amasị anyị banyere onyinye a bụ na ndị egwuregwu nwere ohere iji nweta ọtụtụ onyinye ego kwa ụbọchị na nzọ dị iche iche. Onu ego ọ bụla na-agwụ na 23: 59 CET ma ọ bụ ozugbo enwere mmeri niile.
Maka ndị egwuregwu ọhụụ: nkwụnye ego 1: 100% ruo + 100 + 200 mmezi ntụgharị 18+ Full T & C’s Apply. Ọhụrụ ndị egwuregwu UK naanị. £ 10 min. nkwụnye ego. £ 5 max. nzọ site na iji Daashi. 40 x wagering metụtara. Daashi dị irè maka ụbọchị 14. 20 Spins na egwuregwu ndị ahọpụtara ga-akwụ ụgwọ ozugbo + mgbe ahụ 20 kwa ụbọchị maka ụbọchị 9. Free Spins dị irè maka awa 72 site na kredit. Max. Free na-enweta mmeri £ 100. Skrill + Neteller ewepu. www.oyi-anya
Tags:GamblingBulldogcom Mgbasa ọkọchị
Phillips bụ ihe dị mma ma oge eruola maka Grealish
Onye nnọchi anya gọọmentị Grosvenor Sport Jamie O’Hara leghachiri anya …
Ihe omimi nke cha cha: Online Roulette Fallacies
Dịka otun’ime egwuregwu tebụl kacha ochie na ụwa cha cha, …